ပွင့်လင်းခြုံ Crystal Epoxy Card ကိုရှေ့ကနေ, RFID Transparent Edging Epoxy Tag ကို
 » RFID Crystal Epoxy Tag ကို
RFID Crystal Epoxy Tag ကို RFID Transparent Edging Epoxy Tag ကို, RFID Transparent Wrapping Edged Crystal Epoxy Card, Transparent Wrapping Edged Amber Card, Transparent Wrapping Edged Amber Keychain, ပွင့်လင်းခြုံ Crystal Epoxy Card ကိုရှေ့ကနေ, Transparent Wrapping Edged Crystal Epoxy NFC Tag, Transparent Wrapping Edged Crystal Epoxy Smart Tag, Transparent Wrapping Edged Crystal Epoxy Tag
Can be offset, silk screen patterns and LOGO, အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကို, QR Code ကို, စသည်တို့ကို.
ပစ္စည်း: PVC + Crystal Epoxy
ဘုံ Epoxy Tag ကိုအရွယ်အစား
သာမန် Epoxy Card ကို
ထောင့်မှန်စတုဂံ: 50× 30mm, 42× 26mm
ရင်ပြင်: 35× 35mm, 40× 40 မီလီမီတာ
round: အချင်း 35mm, အချင်း 40 မီလီမီတာ
ရှေ့ကနေ Epoxy Card ကို
ထောင့်မှန်စတုဂံ: 50× 30mm, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 55 × 35mm ရှေ့ကနေ; 42× 26mm, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 47 × 31mm ရှေ့ကနေ
ရင်ပြင်: 35× 35mm, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 40 × 40 မီလီမီတာရှေ့ကနေ; 40× 40 မီလီမီတာ, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 45 × 45mm ရှေ့ကနေ
round: အချင်း 35mm, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 40 မီလီမီတာရှေ့ကနေ; အချင်း 40 မီလီမီတာ, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 45mm ရှေ့ကနေ
ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေအမျိုးအစား: 36× 28mm, packet ကိုချောထုတ်ကုန် 41 × 33mm ရှေ့ကနေ
Transparent Edging Epoxy Card can be printed withavariety of materials, the surface is made of high-grade crystal epoxy, ရေစိုခံ, dust-proof, bubble-free, transparency such as glass, exquisite appearance, vivid image, တောက်ပသော, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော, not easy to wear, can package all kinds of RFID smart chips, ကဲ့သို့: crystal epoxy keychain, Epoxy VIP card, Epoxy mobile payment card, mobile phone pendant card, can customize your favorite patterns and shapes according to customers' wishes.
School student management, အသိုင်းအဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်သူ, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, consumer systems, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်ဆောင်များ, cartoon accessories, တဦးတည်းကတ် Solutions, bus cards, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Transparent Wrapping Edged Crystal Epoxy Card, RFID Transparent Edging Epoxy Tag ကို
prev: LED Flash ကိုအတူ RFID စမတ် Epoxy Card ကို, LED Flash ကိုအတူ NFC ကို Epoxy Crystal Card ကို, LED Flash ကိုစမတ် Epoxy Card ကို
နောက်တစ်ခု: RFID သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Crystal Epoxy Keychain ရှေ့ကနေ, သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Amber Tag ကိုရှေ့ကနေ
RFID Crystal Epoxy Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, crystal Epoxy စမတ်သတ်မှတ်ခြင်း Tag ကို
RFID သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Crystal Epoxy Keychain ရှေ့ကနေ, သတ္တုထုပ်ပိုးပြီး Amber Tag ကိုရှေ့ကနေ